Vaovao - Nikatona soa aman-tsara ny Foara Canton faha-129
Nikatona soa aman-tsara ny Foara Canton faha-129
Nifarana tamin'ny 24 Aprily ny Foara Canton virtoaly faha-129. Xu Bing, mpitondra tenin'ny Foara Canton sady tale jeneraly lefitry ny Foibem-barotra vahiny any Shina no nampiditra ny toe-draharaha ankapobeny.
Nilaza i Xu fa tarihin'i Xi Jinping Thought on Socialism with Chinese Characteristics for a New Era, dia nampihatra ny toromarika avy amin'ny taratasy fiarahabana nataon'ny Filoha Xi ary koa ny politika sy ny fampielezam-peo nataon'ny Komitin'ny Foiben'ny CPC sy ny Filankevi-panjakana momba ny fanamafisana ny varotra ivelany. Eo ambany fitarihan'ny Minisiteran'ny Varotra ao amin'ny PRC sy ny Governemanta Faritanin'i Guangdong, miaraka amin'ny fanohanan'ny sampan-draharaha isan-karazany ao amin'ny governemanta foibe, ny sampan-draharaham-barotra eo an-toerana sy ny masoivoho sy ny kaonsily sinoa any ivelany, ary ny ezaka iombonana ataon'ny mpiasa rehetra, ny 129th Canton Fair niasa tsara ary nisy vokatra tsara azo.
Nanambara i Xu fa amin'izao fotoana izao dia mbola miparitaka eran'izao tontolo izao ny Covid-19, raha toa kosa ny fanatontoloana dia miady amin'ny rivo-doza. Mandritra izany fotoana izany, ny rojo indostrialy sy famatsiana manerantany dia miatrika fanitsiana lalina miaraka amin'ny fitomboan'ny tsy fahatokisana. Notontosaina tamim-pahombiazana tamin'ny aterineto ny Foara Canton faha-129 tamin'ny foto-kevitra hoe "Faran'ny Canton, Fizarana Maneran-tany", amin'ny foto-kevitry ny "misokatra, fiaraha-miasa ary fandresena-fandresena". Ny Foara dia tsy vitan'ny hoe nandray anjara araka ny tokony ho izy amin'ny fitazonana ny firongatry ny varotra ivelany, ny fampivoarana ny fivoaran'ny varotra ivelany tarihin'ny fanavaozana, ary ny fiarovana ny rojo indostrialy sy ny famatsiana eran-tany, fa nampiditra tosika mafy ho an'ny varotra iraisam-pirenena sy ny fanarenana ara-toekarena.
Nampahafantarin'i Xu fa nandeha tsara ny sehatra virtoaly Canton Fair. Ireto tsanganana manaraka ireto dia napetraka teo amin'ny lampihazo, anisan'izany ny Exhibitors and Products, Global Business Matchmaking, VR Exhibition Hall, Exhibitors On Live, News and Events, Services and Support, Cross-border E-commerce Zone. Natambatray ny fiasa amin'ny fampisehoana an-tserasera, ny varotra sy ny fampiroboroboana, ny fifampiraharahana amin'ny raharaham-barotra ary ny fifampiraharahana an-tserasera mba hananganana sehatra ara-barotra tokana mandika ny fetran'ny fotoana sy ny habaka ho an'ny orinasa avy any an-trano sy any ivelany mba hanao raharaham-barotra amin'ny rantsan-tànany. Tamin'ny Aprily 24th, ny tranokala ofisialin'ny Canton Fair dia notsidihina in-35,38 tapitrisa. Mpividy avy amin'ny firenena sy faritra 227 no nisoratra anarana sy nanatrika ny Foara. Ny fifangaroana isan-karazany sy iraisam-pirenena amin'ny fahatongavan'ny mpividy dia hita taratra indray tamin'ny fitomboan'ny isa sy ny firenena loharanon-karena ambony indrindra. Nambenan'ny rafitra fiarovana an-tserasera ambaratonga faha-3, nandeha tsara ny tranokala ofisialy ary tsy nisy trangan-javatra lehibe momba ny fiarovana an-tserasera sy ny fiarovana ny vaovao. Miaraka amin'ny fiasa tsara kokoa, ny serivisy ary ny traikefan'ny mpampiasa nohatsaraina, ny sehatra virtoaly Canton Fair dia nahatratra ny tanjon'ny "hisoratra anarana, fitadiavana vokatra ary fifampiraharahana" ho an'ny mpividy sy mpamatsy, ary noderain'ny mpampiranty sy ny mpividy.
Ny vokatra sy ny teknolojia vaovao dia nitondra fahavitrihana ho an'ny virtoaly Canton Fair. Mpampiranty 26,000 no nanomana tsara sy nampiseho vokatra vaovao vita tamin'ny teknolojia revolisiona amin'ny endrika famoronana, mampiseho amin'izao tontolo izao ny herin'ny orinasa Shinoa amin'ny fanavaozana sy ny sarin'ny orinasa sinoa sy ny marika sinoa ary koa ny "Made in China" sy "Created in China" vokatra. Tao amin'ny 129th Canton Fair, nampiakatra vokatra maherin'ny 2.76 tapitrisa ny fampirantiana, fitomboana 290,000 tamin'ny fivoriana farany. Araka ny vaovao nofenoin’ireo orinasa dia nisy vokatra vaovao 840.000, nitombo 110.000; Vokatra maranitra 110,000, mihoatra ny 10,000 noho ny fivoriana farany. Ny vokatra marani-tsaina, lafo vidy, teknolojia avo lenta miaraka amin'ny sanda avo lenta, fivarotana tena ary IP an'ny tena ary marika dia nanatri-maso ny fitomboana tsy tapaka, miaraka amin'ny vokatra mandroso, marani-tsaina, marika ary manokana ho toy ny mahazatra. Orinasa 340 any ampitan-dranomasina avy amin'ny firenena sy faritra 28 no nandefa vokatra 9000 mahery. Ny fanangonana feno vokatra tsara dia nahasarika mpividy manerantany hanao fifampiraharahana. Ny efitrano fampirantiana virtoaly dia nahasarika mpitsidika 6,87 tapitrisa, miaraka amin'ny fitsidihana ny National Pavilion 6,82 tapitrisa, ary ny International Pavilion 50,000.
Ny filozofia sy ny modely vaovao dia noraisin'ny mpividy sy ny fampirantiana. Amin'ny maha-fivoriana virtoaly fahatelo azy, ny 129th Canton Fair dia nanome hery ireo mpampiranty tamin'ny sehatra Internet Plus. Noho ireo fivoriana roa teo aloha, dia nanana fahatakarana lalindalina kokoa momba ny varotra nomerika sy ny fampitana mivantana ny fampirantiana. Tamin'ny fivoriana faha-129 dia afaka nampiseho vokatra tamin'ny endrika isan-karazany izy ireo ary nanome serivisy mpanjifa isan-karazany. Nojerena in-880.000 ny streaming mivantana. Miaraka amin'ny loharanon-tsarimihetsika mivantana nohatsaraina, ny fampirantiana dia niomana tsara kokoa tamin'ny votoaty mivantana mivantana. Tamin'ny alalan'ny fampitana mivantana sy ny fifaneraserana tamin'ireo mpividy, dia nahazo fahatakarana marina kokoa momba ny fitakian'ny tsena ny mpampiranty, ka nandroso ny R&D sy ny varotra amin'ny fomba kendrena kokoa. Amin'ny ankapobeny, ny stream mivantana tsirairay dia nojerena 28.6% bebe kokoa noho ny fivoriana farany. Ny Efitrano Fampirantiana VR, izay nisy ny tranoheva VR an'ny fampirantiana, dia natsangana mifototra amin'ny sokajy vokatra mba hanomezana traikefa mampientam-po ho an'ny mpividy. Mpampiranty 2.244 no nanamboatra sy nampakatra tranoheva VR 2.662, izay notsidihina in-100.000 mahery.
Ny tsena vaovao sy ny fitakiana vaovao dia nanome fanantenana mamirapiratra. Nanararaotra tanteraka ny tsena anatiny sy iraisam-pirenena tamin'ny alàlan'ny Canton Fair ny mpanatrika, nanome fahafaham-po ny fitakiana vaovao tamin'ireo tsena roa ireo ary nandray anjara tamin'ny fivezivezena roa. Nisy vokatra nahavokatra teo amin'ny tsena nentim-paharazana ary niorina ny fifandraisana akaiky kokoa tamin'ireo tsena vao misondrotra. Navitrika tamin'ny fikarohana ny tsena anatiny ny orinasa sinoa. Nandritra ny Foara Canton faha-129, dia nanamafy ny fanasana ireo mpividy an-trano izahay. Mpividy an-trano 12,000 no nisoratra anarana, nanatrika ny Foara ary nanomboka nandefa hafatra teo noho eo in-2400, nandefa fangatahana 2000 teo ho eo. Nandray fepetra isan-karazany izahay hampifandray ny varotra anatiny amin'ny varotra any ivelany, hampiroboroboana ny varotra ao an-toerana ny entam-barotra novokarina tany am-boalohany ho an'ny fanondranana, ary hanome hery ny fampirantiana amin'ny fanararaotam-pahefana goavana entin'ny firongatry ny fitakiana anatiny sy ny fanatsarana ny fanjifana. Niaraka tamin'ny Departemantan'ny Varotra ao amin'ny Faritanin'i Guangdong sy ireo efitranom-barotra mifandraika amin'izany, dia vita soa aman-tsara ny hetsika "Mamily ny varotra anatiny sy ivelany amin'ny fihodinana roa". Efa ho 200 mahery ny fampirantiana sy mpividy an-trano maherin'ny 1000 no nandray anjara tamin'ny fifandonana teny an-toerana. Naneho hevitra tsara ireo mpanatrika fa hetsika mamokatra izany.
Ny fifanarahana ara-barotra dia natao tamin'ny fomba marani-tsaina sy mazava kokoa. Nohatsarainay ny endri-javatra amin'ny fanodinana ny fangatahana sourcing ao amin'ny kaontin'ny fampirantiana sy ny fandefasana hafatra eo noho eo, nohatsaraina ny fizarana loharano mivantana mivantana sy ny fitantanana ny Foiben'ny Exhibitor mba hanamora ny fifampiraharahana ara-barotra mazava kokoa. Fampiasana azo ampiharina sy mora, ny e-business carte dia natao ho fantsona manan-danja ho an'ny fampirantiana hanangonana ny mombamomba ny mpividy. Manodidina ny 80.000 ny karatra fandraharahana nalefa tamin'ny alàlan'ny tranokalan'ny Canton Fair. Nisy marika “varotra an-trano” nampiana vokatra mihoatra ny iray tapitrisa, ary ny mpividy dia afaka misafidy ireo vokatra ireo amin'ny tsindry iray monja. Namoaka boky torolalana an-tserasera momba ny fampirantiana kalitao momba ny varotra anatiny koa izahay mba hanampiana ireo mpamatsy sy mpividy hifandray haingana. Ao amin'ny faritra "Rural Vitalization" dia nasiana marika manokana ho an'ny orinasa 1160 amin'ny faritany sy tanàna 22 ho an'ny fifandonana.
Nifantoka tamin'ny vokatra azo tsapain-tanana ny hetsika fampiroboroboana varotra isan-karazany. Nanao andiana hetsika fanohanana kalitao izahay mba hitehirizana ny andraikitry ny Canton Fair amin'ny sehatra feno misy fiasa maro. 44 Ny hetsika "Promotion on Cloud" dia natao tany amin'ny firenena sy faritra 32 manerana izao tontolo izao, izay nahitana ny fandrakofana manerantany ary nifantoka tamin'ny "Belt & Road" sy ny firenena RCEP. Ny lanonana fanaovan-tsonia fifanarahana an-tserasera dia natao niaraka tamin'ny masoivoho indostrialy sy ara-barotra 10 toy ny Antenimieran'ny Varotra Shinoa ao Brezila (CCCB) sy ny Antenimieran'ny Varotra Iraisam-pirenena ao Kazakhstan, izay nanitatra bebe kokoa ny tambajotran'ny Canton Fair. Nanao hetsika fifanandrinana izahay ho an'ny Vondrona X5 mpivarotra lehibe indrindra any Rosia, Vondrona Kawan Lama lehibe indrindra any Indonezia, ary Kroger sy mpamatsy Shinoa fahadimy lehibe indrindra any Amerika, nikarakara fampiroboroboana ny vondron'orinasa indostrialy toy ny kilalao Shantou, kojakoja kely ao an-trano Guangdong, lamba Zhejiang ary indostrian'ny sakafo Shandong, manolotra fantsona fifampiraharahana an-tserasera mahomby ho an'ny fampirantiana marika maherin'ny 800 sy ny toby indostrialy lehibe natolotry ny delegasiona ara-barotra sy ireo mpividy manan-danja mba handrindrana ny fifanandrinana eo amin'ireo indostria lehibe ao an-toerana sy ny tsena iraisam-pirenena. Famoahana vokatra vaovao 137 no nokarakarain'ny orinasa 85 lehibe amin'ny sehatra fampirantiana 40 avy amin'ny delegasiona ara-barotra 20, mandrakotra ny vokatra elektrika sy elektronika, vokatra mpanjifa isan'andro ary lamba ary akanjo. Nanangana 2020 CF Awards New Product Show izahay mba hanehoana ireo vokatra sinoa manara-penitra miaraka amin'ny fanavaozana sy sanda ara-barotra indrindra eran'izao tontolo izao. Ny Canton Fair PDC dia nahasarika masoivoho famolavolana manokana 90 avy amin'ny firenena sy faritra 12 anisan'izany i Frantsa, Korea Atsimo, Holandy, ary nanome sehatra ho an'ny fampisehoana sy fifandraisana isan'andro mba hanampiana ireo orinasa amin'ny fanatsarana ny kalitao, ny fananganana marika ary ny fijerena ny tsena amin'ny alàlan'ny fanavaozana. amin'ny famolavolana.
Tonga lafatra ny tolotra fanohanana. Modely natambatra an-tserasera an-tserasera hiatrehana ny fitarainana momba ny IPR sy ny fifanolanana ara-barotra dia nohatsaraina mba hiantohana ny fiarovana ny IPR amin'ny fenitra avo. Mpampiranty 167 no napetraka tamin'ny fitarainana momba ny IPR, ary orinasa 1 no fantatra fa voarohirohy ho nandika. Fikambanana ara-bola 7 ao amin'ny Sampan-draharaha ara-bola no nanamboatra vokatra manokana ho an'ny fampirantiana. Efa ho in-49.000 no notsidihina ilay fizarana, ka fampindramam-bola maherin'ny 3.300 no natolotra ary raharaha 78.000 eo ho eo no voakarakara tamin'ny fitambarany. Nikarakara hetsika famatsiam-bola ivelan'ny aterineto niaraka tamin'ny Bank of China Sampana Guangdong ihany koa izahay mba hisian'ny fifandraisana mivantana amin'ireo orinasa fampirantiana ary nanome tolotra ara-bola nokendrena. Ny serivisy fadintseranana an-tserasera dia nohatsaraina mba hitarihana ny orinasa handray soa feno sy tsara kokoa amin'ny politika mifandraika. Ny tolotra ara-barotra any ivelany dia natolotra tamin'ny fomba mitambatra, toy ny paositra, ny fitaterana, ny fitsirihana ny entana, ny fanamarinana ny kalitaon'ny vokatra, mba hananganana sehatra serivisy "miato". Nanangana ny Faritra E-varotra miampita sisintany izahay ary nanao hetsika mitondra ny lohateny hoe "Same Tune, Shared View" mba hifandraisana amin'ny sehatra e-varotra sy hanitarana ny tombontsoa amin'ny orinasa maro kokoa. Naseho ho an'izao tontolo izao ny faritra 105 miampita sisintany feno e-varotra eran-tany. Nohatsarainay ny rafitra serivisy mpanjifa marani-tsaina multimedia, fiteny maro ary 24/7 izay ahitana "fanohanana mpiasa miampy serivisy marani-tsaina" mba hanomezana serivisy mety ho an'ny mpividy sy ny fampirantiana.
Xu dia nampidirin'i Xu fa ny sandan'ny Canton Fair dia miankina amin'ny fandraisany anjara amin'ny fiaraha-miasa ara-barotra eo amin'i Shina sy ny tontolo hafa amin'ny fomba vaovao, fifampiraharahana ara-barotra tokana ary fitadiavana orinasa sinoa sy vahiny, loharano azo itokisana amin'ny mpamatsy sy mpividy, fahitana ny indostria. fironana sy varotra manerantany ary serivisy feno. Ny Canton Fair dia nampitombo ny fivoaran'ny indostrian'ny fampirantiana sinoa sy iraisam-pirenena, ary nandroso ny varotra ivelany any Shina, ny varotra eran-tany ary ny fitomboan'ny toekarena manerantany. Amin'ny ho avy, izahay ao amin'ny Canton Fair dia hanompo bebe kokoa ny paikadin'ny firenena Shina, ny fanokafana rehetra manodidina, ny fanavaozana entin'ny fampandrosoana ny varotra ivelany, ary ny fananganana lamina fampandrosoana vaovao. Araka ny fitakian'ny orinasa sinoa sy vahiny, dia hanatsara hatrany ny tolotra omenay izahay mba hanomezana tombony bebe kokoa ho an'ny orinasa eto an-toerana sy any ivelany.
Nilaza i Xu fa ny fampahalalam-baovao maneran-tany dia namokatra tatitra voarafitra tsara sy marolafy momba ny Foara Canton faha-129, mitantara ny tantara sy mampiely ny feon'ny Foara, ka niteraka rivo-piainana tsara ho an'ny besinimaro. Tsy andriny ny hihaona amin’ny rehetra amin’ny fivoriana faha-130.